ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းလုပ်သူတိုင်း ….. Production ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအပိုင်း နဲ့ Distribution အပိုင်းမတူဘူးဆိုတာ သိကြပါတယ်။ | မာသင်
ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းလုပ်သူတိုင်း ….. Production ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအပိုင်း နဲ့ Distribution အပိုင်းမတူဘူးဆိုတာ သိကြပါတယ်။
Production ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအပိုင်း နဲ့
Distribution အပိုင်းမတူဘူးဆိုတာ သိကြပါတယ်။
ကိုယ့် ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းကို အာရုံစိုက်လိုက်ရင် ဖြန့်ချိရေးမှာ အားနည်းသွားလေ့ရှိသလို ..
ဖြန့်ချိရေးလမ်းကြောင်းကို အာရုံစိုက်လိုက်ပြန်တော့ ထုတ်ကုန်မှာ အားနည်းသွားပြန်ရော။
ဒါကြောင့် .. လုပ်ငန်းအစပိုင်းမှာ အောက်ပါ ရွေးချယ်မှုတစ်ခုကိုဆုံးဖြတ်ရလေ့ရှိတယ်။
သင်ဆိုရင် …. ဘယ်နံပါတ်ကိုရွေးမလဲ?
(၁) လား ?
(၂) လား ?
ဘာကြောင့်လဲ ။ မန့်ခဲ့ပါ ။